Madaxweyne Putin oo ganaaxey saraakiil lagu eedeeyey daroogo. – Radio Daljir
Madaxweyne Putin oo ganaaxey saraakiil lagu eedeeyey daroogo.
Luulyo 19, 2016 12:28 b 0
Mosocw, July 19 2016–Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, ayaa ku dhawaaqay ganaax kumeel gaar ah oo lasaaray saraakiisha ay magacawday Hay’ada la dagaalanka daroogada ee (WADA), taasi oo ku eedaysay adeegsiga daroogada ciyaarihii olombikada ee 2014.
Putin ayaa warbaahinta u sheegay in shaqada si kumeel gaar ah looga joojin doono saraakiisha ay Hay’ada magacawday inta uu dhammaanayo baaritaanka kusocda.
Hay’ada WADA ayaa soo saartay warbixin ay kusheegtay in saraakiisha wasaaradda ciyaaraha ee Ruushku ay isku howleen khalkhalgelinta baaritaankii ay samaynayeen iyaga oo kaashanaya adeega ammaanka dalkaasi (FSB).
In Kabadan 2,000 oo Soomaali ah oo waxbarasho ku weydey afgembigii fashilmay ee Turkiga.